T-170 BULLDOZER: SHARAXAAD, ISBEDDEL, QEEXAYO - MISHIINADA GAARKA AH
Qodobkani, waxaynu baran doonaa qalabka dhismaha culus, oo loo qoondeeyay "classic" dhismaha iyo dhul-gacmeedka, halyeeyga warshadaha sayniska, oo ah bulldozer T-170.
Sharraxaadda iyo dib-u-habaynta cagaf-warshadaha
Tilmaamaha Bulldozer T-170 - Goobta dhismaha ee xoogga leh ee samafalka ah iyo baabuurta warshadaha, oo loo abuuray hagaajinta tikidhada taxane T-130. Iyada oo ku saleysan T-170 waxay soo saartay qiyaastii siddeed kala duwanaansho kala duwan. Hadda tareenka waxaa lagu sameeyaa heerar kala duwan iyo isbedel. Qaab kasta oo xiga, oo lagu soo saaro warshadda, waa nooc ka sii wanaagsan oo ah qaabkii hore. Badanaa farsamooyinka la bedelay mid ka mid ah noocyada kala duwan ee mishiinada ayaa lagu rakibay. Sidaa darteed, waxaad iibsan kartaa baabuur T-170 kaas oo ay ku jirto nooca D-160, ama horayba loo sii diyaariyay mashiinka D-180, kaasoo awoodiisa kor u kacay 180 l / s. Awoodda qaybta korontada ee ugu dambeysa waxay kuu oggolaaneysaa inaad kordhiso waxtarka beeraha.
In ka badan darsin sano, tareenka T-150 ayaa weli ah kaaliyaha ugu fiican ee beeralayda. Waa mid ka mid ah baabuurta caanka ah ee ugu caansan waxayna ku yimaadaan laba nooc: gawaarida iyo taayirrada wadajirka ah.
Aan sii degganaaneyno bedelka farsamadan:
Si aad u deg deg deg ah ee goobta dhismaha loogu talagalay dhismaha ama ka saarista kubadda cawska sare waxaa jira isbeddel lagu sameeyo mindida toosan.
In si wax ku ool ah loo qodo boholaha, horumariyo ciidda iftiinka ama dhagax la jajabiyey, ku habboon farsamada leh baalal wareeg ah.
Isbeddelida lafaha ciriiriga ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad fuliso shaqada lagama maarmaanka ah si ka dhakhso badan xirmada kale ee jirka. Bulldozer noocan oo kale ah ayaa si sahal ah ugu shaqeyn kara qayb ka mid ah godadka ama godadka.
Waa muhiim! Dhamaan isbeddelada taxanaha ah waxaa lagu sii dari karaa qalabka la xakameynayo. Ku dariddani waxay kuu ogolaaneysaa inaad qabato shaqooyin badan oo kala duwan.
Farsamadan waxaa loo soo saaray in ka badan 25 sano, laakiin inkastoo tani, maanta T-170 waxay ku sii kordheysaa dalabaadka iibsadaha. Tani maahan mid la yaab leh, maadaama qalabku uu isku daro kalsooni, raaxo, nadiifin fudud, faragelinta. Haddii aad leedahay dhisme waddo adag ama dhismo, nooca bulldozer T-170 waa mid aan muhiim ahayn. T-170 waxay ku xirantahay haanta shidaalka 300 litir iyo 160 ama 180 hp oo leh shidaal noocyo kala duwan ah. Isticmaalka shidaalka ee nooca bulldozer T-170 waa mid yar. Miisaanka bulldozer T-170 waa 15 tan.
Ma taqaanaa? T-170 waxaa laga soo saaraa dhirta Chelyabinsk Tractor Plant.
T-170 waxaa lagu qalabeeyaa qol shaabbi leh oo leh qaab casri ah oo casri ah. Waxaa lagu rakibay barxad gaar ah oo qallafsan. Korodhka muuqaalka ah ee loogu talagalay hawlwadeenada leh boor weyn. Xaaladaha raaxada ee cabsida waxaa lagu siiyaa qalabka dhawaaqa. Qolka waxaa ku jira rinjiga.
Ma taqaanaa? Tilmaameedkii ugu horeeyay ee bulldozer T-170 ayaa la sii daayay 1988-kii waxaana laga bilaabo bilawgii soo-saarka uu noqday farsamo caan ah.
Gaadiidka T-170, waxaad ka qaadi kartaa qalab kala duwan oo ku dheggan bulldozer:
Meelaha biyaha ku jira
Halbeegyo ilig ah oo keliya
Burburin toos ah ama mid bareer ah
Mashiinka qalabka bulldozer ee T-170 wuxuu yahay unug afar geesle ah oo awood u leh inuu ku shaqeeyo shidaal kala duwan. Tusaale ahaan, naaftada, saliidda ama gaasta gaasta. Thanks to qaabkan, mootadani waxay shaqeyn kartaa xitaa xaaladaha cimilada ugu xun.
Waa muhiim! Shidaalka, haddii aad isticmaashid T-170, ayaa aad u dhaqaaley dhaqaale ahaan, marka la barbardhigo analoogo, faa'iido dheeraad ahna waa taangiga shidaalka leh mugga 300 litir.
Tilmaamo faahfaahsan oo farsamadani waxaa lagu bixinayaa miiska:
Sidee loo isticmaali karaa bulldozer beeraha
Bulldogga noocan ah waxaa loo isticmaali karaa shaqooyinka beeraha. Thanks to T-170 traktor, dhirashada carrada si fudud ayaa loo sameeyaa (waxaa xitaa loo isticmaali karaa qulqulka qoto dheer ee ciidda culus), beerashada joogtada ah, beerashada dalagyada, qashinka, iyo barafka xilliga qaboobaha iyo xilliga gu'ga waa suuragal.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida arjiga
Xasilloonida sare ee cimilada adag
Helitaanka qaybaha qaybta ah
Awoodda Gawaarida (toban kun oo moto saacadood)
Awooda lagu shaqeynayo noocyo kala duwan oo shidaal ah (gaasta, gaasta gaaska, shidaalka naaftada)
Sicirka qiimaha leh
Kala duwanaansho - waxaa loo isticmaalaa:
miyir-beelka, shaqada dhismaha;
ee horumarinta mashiinno dhoobo ah (dhoobo, ciid iyo quruurux).
Dhibicda daciifka ah waa xadhigga dunta
Marka la barbardhigo mishiinada reer galbeed, xakamaynta waa mid aad u adag.
Joogitaanka raaxada ee operatorka ee cabsida waxay ku sii jirtey heerka horumarka
In kastoo ay jiraan cilladahan, Tractor-ka waxaa loo isticmaalaa dalal kala duwan, aagagga cimilada iyo xaaladaha cimilada. Baahida loo qabo farsamadan ma uusan hoos u dhicin sanadihii, sababtoo ah cagajuglaha waa mid aad loogu kalsoonaan karo isla markaana aan qabyo ahayn. Intaa waxaa dheer, qalabka iyo mashiinka tareenka ayaa la cusbooneysiiyaa mar kasta.
Beeraha yaryar iyo qoysaska fursada ugu fiican marka la doorto qalabka mashiinka ayaa noqonaya socodka gadaashiisa. Thanks to units unugyada la beddeli karo, waxaa loo isticmaali karaa in lagu qodo baradhada, saarista barafka, alaabada dabka qaboobaha.
Sidaa daraadeed, qodobkan waxaan fiirineynay sumcadda T-170 ee bulldozer, waxbartay si faahfaahsan sifooyinka farsamada, faa'iidooyinka ka sarreeya iskudhafka iyo baaxadda codsiga. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu kaa caawin doono hawlahaaga xirfadeed iyo, haddii loo baahdo, fududee xulashada qalabka beeraha.